Agung Demak Mosque, Demak Cathedral Mosque, Indonesia। Masjid Agung Demak - जावा
ठेगाना: Bintoro, डेम उप-जिल्ला, डेम रेजिसी, सेन्ट्रल जावा 59511, इंडोनेशिया
इंडोनेशियाले हजारौं मन्दिरहरूको देशलाई सही रूपमा बोलाउन सक्छ। यस देशमा धेरै धार्मिक भवनहरू छन्: पुरातन र आधुनिक, ढुङ्गा र काठ, बौद्ध, हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई र अन्य विनाश। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवधारणाको एक संरचना अगग डेमक मस्जिद हो।
केही स्रोतहरुमा अगगग डेम को डेमकास्का कैथेड्रल मस्जिद भनिन्छ। यो केवल जावाको द्वीपमा मात्र होइन, सबै इन्डोनेसियामा मात्र पुरानो हो। मस्जिद केन्द्रीय जाभा को प्रशासनिक केन्द्रमा डेमक शहर को दिल मा स्थित छ। शहरको साइटमा पहिले डेमका सल्तनत थियो।
दमक Bintor जावा मा पहिलो इस्लामी राज्य को शासक को प्राप्त महिमा को अङ्गुंग डेमक मस्जिद को एक मान्य प्रमाण मानिन्छ। इतिहासकारहरू विश्वास गर्छन् कि अगुग डेम 15 वीं शताब्दीमा पहिलो सुल्तान रेडेन पाटाको शासनकालमा निर्माण गरिएको थियो। मस्जिद काम गर्दैछ र सनी विद्यालयको संग सम्बन्धित छ। यो युनेस्को विश्व विरासतको एक वस्तु हो।
Agung Demak Mosque को बारे मा दिलचस्प छ?
ती मन्दिरको शास्त्रीय जाजा मस्जिदको एक भव्य उदाहरण हो। मध्य पूर्वमा समान संरचनाहरूको विपरीत, यो पुरा तरिकाले काठको निर्माण गरिएको छ। र यदि तपाईं इङ्गुंग डेमको तुलना इङ्गल्याण्डमा अन्य आधुनिक मस्जिदहरूको तुलना गर्नुहुन्छ, यो अपेक्षाकृत सानो छ।
भवनको तहमा छत चार विशाल टीका स्तम्भहरूमा खडा छ र जावा र बालीका द्वीपहरूको पुरातन हिन्दु-बौद्ध सभ्यताको काठको धार्मिक भवनहरूसँग धेरै सामान्य आर्किटेक्चरल विशेषताहरू छन्। मुख्य प्रवेश द्वार दुई ढोका खोलिएको छ, जुन फूल मोती, भित्ता, मुकुट र पशु सिरको साथ खुसी दाँतको मुखमा घोरिन्छ। दरवाजेको आफ्नै नाम - "कानुन ब्लेडहेग", जुन शाब्दिक अर्थ "गोरखाको ढोका" हो।
विशेष गरी उल्लेखनीय रूपमा सजावट तत्वहरूको प्रतीकत्व हो। नक्काशीदार आंकडा चन्द्रमा गणना को आधार मा, एक क्रोनोग्राफिक अर्थ बोल्छ: साका 1388 वा 1466 सीई को वर्ष। यो विश्वास भएको छ कि त्यो निर्माण सुरु भयो। मस्जिदको अगाडि पर्खालले मिट्टी के बरतन टाइलको साथ सजाएको छ: त्यहाँ 66 वटा छन्। तिनीहरू आधुनिक भियतनामको सीमा भित्र पुरातन राज्य चम्पाबाट ल्याइएका थिए। ती वर्षका केही ऐतिहासिक रेकर्डहरूका अनुसार यी टाइलहरू मूलतः सुल्तान मगापतको महलको सजावटबाट चोरी भएका थिए, र पछि तिनीहरू अगुग डेमकको मस्जिदको सजावट तत्वहरूमा थपिएका थिए।
भित्रको धेरै ऐतिहासिक र धेरै मूल्यवान कलाकृतिहरू छन्। र मस्जिद नजिकै डेमक र संग्रहालय को सबै सन्तान दफन गरिन्छ।
मस्जिद कसरी प्राप्त गर्ने?
डेमकको ऐतिहासिक भागमा, ट्याक्सी लिने वा पेडिक्याको सेवाहरू प्रयोग गर्न अधिक उपयुक्त छ। तपाईं पनि कार भाडामा राख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं केवल सेवा मुस्लिम भित्र भित्र मुस्लिम हुन सक्नुहुन्छ। धेरै तीर्थयात्रीहरू मृतकलाई सम्मान गर्न र पहिलो कोनारबाट कल सुन्न को लागि कब्र नजिकको मन्दिरको इलाकामा रात बिताउँछन्। जो कोहीले मुस्लिमको लागि मस्जिद जान सक्छ।
गर्भावस्थाको समयमा ऋषि
कसरी राम्रो पत्नी बन्न सक्छ?
विवाहित मानिसले तपाईंलाई प्रेम गर्दछ भने तपाईंलाई कसरी थाहा छ?
पर्स मा साजिश
100% स्नेह: यी बच्चाहरूले उनीहरूको पहिलो स्वभावमा गर्व गर्छन्!
एक दिनमा ज्यूरिखमा के देख्नुहुन्छ?
घर मा orchids को प्रजनन
हन्ना संग कपाल को रंग - कसरि इच्छित छाया को प्राप्त गर्न को लागि?
हम र काली मिर्च संग सलाद
बेरियर तेल - अनुप्रयोग
महिलाको स्याक्स पैंट 2013
टाउको दुखाइबाट स्पाजमालगोन
बेलरना नाखून को आकार नेल कला मा एक नयाँ फैशनेबल प्रवृत्ति हो
केट मिडलेटनले बालबालिकालाई पढाईमा पुस्तकहरू परिचय गरे
गर्लफ्रेंड 2014 को लागि केटीहरु
पोस्टिस्टिन फोमबाट एक डुङ्गा कसरी बनाउने?
ब्लाउज लामो आस्तीनसँग
2 दिनमा प्रागमा के देख्नुहुन्छ?
कालो छोटो कपडाहरू
अहिले 2015 मा फैशन मा कस्तो मैनुअल छ?
जेन्स बोलररहरू के गर्ने?